इटालीमा जस्तै कोरोना नेपालमा फैलिए के हुन्छ ? « Salleri Khabar
सन २०१९ को डिसेम्बरमा चीनबाट एकाएक डरलाग्दो खबर फैलियो- कोरोनाको भाइरस बारेमा । संसारभर सन्नाटा छायो, मान्छेहरु कोरोनाका कारण मर्न थाले । मर्ने क्रम रोकिएको छैन, रोक्न सकिएको छैन । अझ डरलाग्दो कुरा त के भयो भने यो महामारी विश्वभर फैलिन सुरु गर्‍यो । चीनमा मात्र ८० हजार बढी संक्रमित र तीन हजार २ सय बढीको यो महामारि का कारण मृत्‍यु भाईसक्यो ।अहिले, इटालिमा संक्रमित र मृत्‍यु हुनेको संख्या निक्कै छ ।
बढ्दो बिरामीको संख्या र संक्रमणलाई रोक्न पुरा विश्वलाई चकित पार्दै चीनले एक हजार सैयाको अस्पताल निर्माण गरिदियो, त्यो पनि एक हप्तामा । फेरी, दश हजार बिरामीलाई उपचार गर्न मिल्ने अस्पताल बनायो । संक्रमन रोक्न उसले हदैसम्मको कठोर नीति अप्नायो । कोरोनाको उद्गम थलो मानिने हुवेई प्रान्त लकडाउन नै गर्नुपर्‍यो । अन्तराष्ट्रिय उडानदेखी व्यापार बन्द गर्‍यो । र अहिले चीनले करीब करीब कोरोनालाई आफ्नो काबुमा राख्न सफल भएको मान्न सकिन्छ ।
चीनले कोरोना संक्रमणबाट भोग्नु परेको क्षती पुरा संसारले नियालीरहेको थियो । तर, कोरोना, त्यसको फैलावट र क्षतिलाई इटाली लगायत पश्चिमा मुलुक र अन्य देशहरुले नजरअन्दाज गरे । त्यसैको फल आज सारा विश्वले खेपिरहेको छ । १९४ देशमा यो रोगले जरा गाडीसकेको छ । सवा चार लाख बढी कोरोना संक्रमित भईसकेका छन । ती मध्य झण्डै २० हजारको ज्यान गैसकेको छ र करीब एक लाख १० हजार जना उपचारपछी घर फर्केका पनि छन । अहिले युरोप, अमेरिका लगायतका राष्ट्रहरुमा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ। अझ विशेषगरी चीनको वुहानपछी इटाली कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।
यसबाट एसिया, दक्षिण एसिया र विशेषगरी नेपाल पनि अछुतो हुन सकेन । सुरुमा, इटालिएनहरुले युरोप र एसिया बिचको दुरीलाई आधार माने र भ्रममा परे । त्यसकै फलस्वरुप अहिले इटालिमा संक्रमित र मृत्‍यु हुनेको संख्या चीनको भन्दा बढी छ । उता अमेरिकामा पनि हालत त्यस्तै छ । त्यहाँका जनताले सजगता अपनाएनन, सुरकारले भनेको निर्देशनलाई अटेरी गरे र अहिले अवस्था भयाभह बन्यो । इटाली सरकारले संक्रमण रोक्न हर्सम्भव प्रयास गरिरेहेको छ ।
अब, छिमेकी भारत र नेपालको अवस्था के छ त ? भारत, कोरोना भाइरसको बारेमा पूर्ण जानकार छ र इटाली जस्तो गल्ती उसले गर्न चाहदैन । सबै प्रदेश र जिल्ला लक्डाउन गरिसकेको छ । दक्षिण एसिया आफैमा एउटा ठुलो बजार हो, जनसंख्याको हिसाबले । यहाँ संक्रमण भयाभह भयोभने त्यसले पुर्याउने क्षेती कल्पना मात्रै पनि गर्न सकिन्न । छिमेकी भारत सजग हुनु नेपालका लागि पनि साकारात्मक हो किनभने नेपालको भौगोलिक सीमादेखी व्यापारसम्म प्रत्यक्ष जोडीएको छ । दुई देश बिच खुल्ला सिमाना छन । भारतमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो छ, करीब साढे ५ सय नाघिसक्यो, ११ जनाको मृत्‍यु नै भसक्यो । अर्को छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तान पनि कोरोना ग्रसित हुँदै छ । नेपालमा पनि ३ जना संक्रमित भेटिसकेका छन । ती मध्ये १ जना उपचार पछी घर फर्केको अवस्था छ ।
नेपाल बिकासोन्मुख देश हो र यहाँ प्रयाप्त मात्रामा संरचनाहरु छैनन । नेपालको धेरै जन्संख्यामा स्वास्थ्य सेवाको पहुंच पुग्न बाँकी नै छ । तर, कोरोना भाइरसको महामारीको बारेमा जानकार छ । स्थिती भयाभह हुनुपुर्व संक्रमण रोक्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो । दु:खको कुरा, नेपालसँग अस्पतालको अवस्था दयनीय छ । सामान्य बिरामीको समेत उपचार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सजगता, पुर्व तयारी र सरकारको आदेश पालना गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । विकसित देश चीन र इटालीलाई परेको हम्मे हम्मे हामीले देखिसकेका छौं । नेपालभन्दा १० औं गुणा राम्रो स्वास्थ्य सुविधा भएका ती राष्ट्रले रोक्न नसकेको भाइरस विरुद्ध लड्न नेपाली जनतालाई अटेरिपन र हेलचक्य्राई गर्ने छुट पक्कै हुने छैन । सरकारको निर्देशन आज्ञाकारी बनेर पालना गर्न सके मात्रै यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ ।